Howquerity not exphg080808080s-G လက္ကားလက္ကား | Twesix
နနွင်းသည်အာရှအစားအစာများတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသောအမွှေးအကြိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အစားအစာနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမတိုင်မီခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တေွ့ နနွင်းအကြီးအကဲ Dehdyrator သည်အနိမ့်ဆုံးနှင့်အပူချိန်တွင်အပင်များကိုခြောက်သွေ့စေပြီးအာဟာရနှင့်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။
ဘယ်လိုခြောက်သွေ့လဲ Tsix Herb အခြောက်ခံစက်ကနနွင်း
2 ။ နနွင်းကို 2-3mm သို့အချပ်အပိုင်းအစများအချပ်
5. အပူချိန်ကို 45-70 ဒီဂရီဂရမ်တွင်ထားပါ။ ခြောက်သွေ့သောကာလကို2သို့မဟုတ်3ကြိမ်ခွဲခြားထားသည်
6. 8-12hours ပြီးနောက်ခြောက်သွေ့သောအရာပြီးဆုံးသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခြောက်သွေ့တဲ့နနွင်းကိုနံ့သာမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်စေ, ဒါကြောင့်ခြောက်သွေ့တဲ့အပူချိန်မြင့်မားလို့မရဘူး။ သို့မဟုတ်ပါ0င်သည့်အပင်များပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ နနွင်းခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Tsix Dryer မှပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။
အခြောက်လှန်းစက် နနွင်းခြောက်စက် herb dehydrated စက်